त्यसपछि उनीहरुले मेरो कपडा खो’ल्न थाले…. – Khabar 27 Media
February 11, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on त्यसपछि उनीहरुले मेरो कपडा खो’ल्न थाले….
रातको समयमा शौच गर्न निस्किएकी बालिकामाथि सा’मू’हि’क क,रणी गरिएको छ। सोमबार राति मोटरसाइकलमा आएका दुई युवाले अ’प’ह’र’ण’पछि १४ वर्षीया ती बालिकाको क,रणी गरेका प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले घ,टनाराति १ बजेतिर मात्रै थाहा पायो। खोजी गर्दा घ,टनामा संलग्न फेला नपरेपछि मात्र आफन्त र स्थानीयले नै ढिलो गरेर घटनाका बारेमा प्रहरीलाई जानकारी दिएका डीएसपी थापाको भनाइ छ। त्यसपछि खोजी थालेको प्रहरीले पनि ब,ला,त्कारमा संलग्न युवालाई फेला पार्न सकेन।
‘घ,टनालगत्तै प्रहरीलाई जानकारी दिइएन।गाउँले आफैं हो’ह’ल्ला गर्दै खोजीमा निस्किएछन्। त्यो कुरा चाल पाएर घ,टनामा संलग्नहरूले भाग्ने मौका पाए,’ डीएसपी थापाले भने, ‘घ,टना सुन्नेबित्तिकै खोजी थालिए पनि उनीहरू भा’गि’स’के’का थिए।घ,टनास्थलबाट भारतीय भूमि नजिकै भएका कारण भारततिर नै फरार भएको आ,शंका छ।’
फेसवुकमा लेख्दा र युट्युवमा बोल्दा होस् गर्नुस्, आउँदैछ यस्तो कानुन-जानुपर्ला जेलमा
आ,गो ताप्न कै लागि यी व्यक्तिले ज,लाए पाँच सयका नोटहरु
आफ्नै पसलमा काम गर्ने युवती राम्रो लागेपछि एक सयमा पसल बेचेर हिँडेपछि
July 27, 2021 July 27, 2021 Shyam Lama
August 28, 2021 August 28, 2021 Shyam Lama